Eoropa Afovoany & Atsinanana · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Afovoany & Atsinanana · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Eoropa Afovoany & Atsinanana tamin'ny Aogositra, 2012
Rosia 26 Aogositra 2012
Rosia 18 Aogositra 2012
Okraina 05 Aogositra 2012
Tsara, fa tsy loharanom-baovao iray tena azo iankinana momba ireo mpikambana ao anatin'ny ekipa Rosiana teraka tany ivelany ny vohikala ofisialin'ny Lalao Olaimpika 2012 ao Londona. Nangataka fanitsiana, nanomboka fanentanana fanoherana amin'ny alalan'ny fanoratana taratasy ireo Okrainiana mpampiasa aterineto, ary na ny Minisitry ny Raharaham-bahiny aza dia tafiditra anatin'izany tamin'ny alalan'ny Twitter.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 05 Aogositra 2012
Vao nanomboka indrindra ny Ramadany, volana fahasivy ao amin'ny tetiandron'ny Silamo. Io dia fotoana ifadian'ireo Silamo hanina manomboka ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany, mba hanakaikezana kokoa an'Andriamanitra ary Hankalazana ny fahasoavany. Manerana izao tontolo izao, ireo Silamo dia nanao izay hakàna ny fanahin'ilay volana anaty sary maromaro, nizara azy ireo tanaty karazana vohikalam-pifandraisana sosialy isan-karazany
Albania 05 Aogositra 2012
Rosia 03 Aogositra 2012
Mampiasa ny fanoratana bilaogy mba hametrahana ny fahefana malefaka any Rosia i Zeorzia. Na dia mamoaka amin'ny teny Zeorziana aza ny ankamaroan'ireo bilaogy Zeorziana, dia misy ihany koa maromaro amin'ny Rosiana no mahay ny teny Zeorziana ao amin'ny sehatra fitorahana bilaogy malaza LiveJournal (LJ). Mampiasa tetikady voarindra aza ny governemanta Zeorziana amin'ny fanakaikezana ny vahoaka Rosiana amin'ny fampiasàna am-pahendrena ny media vaovao.